Real Madrid oo Dalabkeedii Ugu Horeeyey u Gudbisay Manchester City | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(13-12-2018) Kooxda Real Madrid ayaa dalabkeedii ugu horeeyey u gudbisay dhigeeda kooxda dalka ingiriiska ee Manchester City.
Real ayaa gudbisay dalab ay ku doonayso laacibka da’da yar ee u dhashay dalka Spain ee afka hore uga ciyaara Manchester City ee Brahim Diaz .
19 jirkan ayaa u eeg mid mustaqbal wanaagsan ku leh kubbada cagta hase ahaatee ilaa imika waxaa ay labada kooxood isku mari la’yihiin dhinaca qiimaha iyadoo kooxda Real ay ku doonayso lacag ah £10 milyan halka ay kooxda Manchester City ay soo bandhigtay £20 milyan.
Lacagta Manchester City ay ku doonayso in laga siisto ayaa ah lacag aad u badan marka loo eego Brahim Diaz, balse sababta ay Man City sidaa u samaynayso ayaa waxa ay tahay iyadoo doonaysa in uu ciyaaryahankani la sii joogo kooxda.
Brahim Diaz ayaa xagaaga soo socoda ka dhaqaajin doona Manchester City hadii ayna iibin ama aanu kordhin qadaraas cusub u saxeexin kooxda, waxaase ay tahay xaqiiqadu in aanu jeclayn in uu sii joogo kooxda oo uu ka cago jiidayo in uu saxeexo heshiis cusub isagoo u haqal taagaya in uu u dhaqaaqo dhankaa iyo kooxda Real Madrid.